SIDA LOO SAMEEYO DHUUNTA DACHA, HABABKA WAX KU OOLKA AH - CABBITAANKA DUSHA SARE
Ugu Weyn Ee Cabbitaanka dusha sare
Dheecaan goobta goobta gacmihiisa u gaarka ah, sida loo ciribtiro cawska dhulka hoostiisa
Xilliga xagaaga ee casriga ah maalin kasta waxay wajahayaan dhibaatooyin badan oo ka soo baxa dhulkiisa. Kontaroolka cayayaanka, geedo bacriminta ah, daryeelka iyaga iyo waraabinta - calaamad u dhiganta sawirka maalinlaha ah ee degganaha xagaaga. Si kastaba ha noqotee, dhibaatada ugu weyn iyo burburka waa xoqitaan xad dhaaf ah ee goobta. Dhibaatadan aan la yaabka laheyn waxay dhab ahaantii saadaalisaa jiritaanka dhibaatooyinka guud ee soo-saarka guud. Nasiib wanaag, bannaanka ma aha kali ah ee dhibaatadan, iyo maqaalkeenuna si buuxda u sharaxi doonaa waxa ay yihiin hababka ugu wax ku oolka ah ee lagu qallajiyo goobta laga bilaabo dhulka dhulka.
Xoqidda xad dhaafka ah ee goobta, waxa la sameeyo
Biyaha xad-dhaafka ah ee dhulka ayaa abuuri kara dhibaatooyin badan, taas oo ka mid ah taas oo ka sii daraysa biqilka miraha iyo khudaarta iyo bilowga qulqulka. Si aad u badbaadisid dhismahaaga xagaaga ee dhibaatooyinka lama huraanka ah, dabcan, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin deg-deg ah, sameynta doorasho ku habboon hal ama hab kale oo biyo ah.
Caawinta koox u qalma. Sida dhibaatooyinka kale, qaylo dheeraadka ah ee aagga ayaa noqon kara go'aansadeen khubaro khaas ah haysashada qalab gaar ah. Xaqiiqdii waxay garanayaan sida si habboon u daadinayso dacha, laakiin, sida caadiga ah, xirfadlayaashu waxay si fudud u biyo qabaan bambooyin - saameyntu waa mid deg deg ah, laakiin aan la joogteeyn.
Codsiga sanduuqa ee ciidda. Habka wuxuu ka kooban yahay ciidda carrada, taas oo ah isku-dhafka isku-dhafka ee ciidda ee isku dheelitirka. Habkani ma aha oo kaliya xalinta dhibaatada, laakiin sidoo kale si weyn u hagaajin tayada dhulka, sii kordhaya wax-soosaarka. Dhibaatada farsamada waa baahida loo qabo qadar ballaaran oo ah ciid iyo shaqo xoog leh.
Abuurista dheecaan. Ku rakibidda nidaamka dheecaanku waa abuurista qashin khaas ah oo ku baahsan goobtoo dhan, isdhexgalka dheeraadka ah iyo dheecaanka ugu dambeeya ee biyaha. Habkani waa mid wax ku ool ah, la awoodi karo oo kharashkuna wax ku ool yahay. Waxaa intaa dheer, ilaa taariikhda, waayo-aragnimada dadka degan xagaaga, oo ka kooban qaabka loo sameeyo dheecaan, ayaa si xor ah loo darsan karaa loona xoojin karaa gacmahaaga. Sababtoo ah sababo kala duwan iyo qaddarin, khabiiro xooggan ayaa ku talinaya inay doortaan habkan xalinta dhibaatada leh qoyaan xad dhaaf ah.
Furo furan. Nidaamka ka saarista biyaha xad-dhaafka ah ayaa laga xalliyaa abuurista (qodaya) furaha furan ee xagal yar. Sidaa awgeed, biyaha isku xira goobta ayaa galaya godadka leexinta oo waxaa laga saaraa godka caadiga ah ee ka baxa ama ka baxsan dhulka. Dhibaato weyn oo ka mid ah xayawaanka noocan oo kale ah waa daadinta degdegga ah iyo wasakheynta - waxtarnimada ayaa la arkay todobaadyada hore.
Dhirta Beeraha. Geedaha kala duwan, sida cabbitaanka iyo bjørk, tusaale ahaan, waxay si weyn u caawiyaan nadiifinta marshlands. Geedaha, sababtoo ah isticmaalka biyaha, si macquul ah u qalaji aagga. Si kastaba ha noqotee, qalajinta goobta ayadoo gacan ka geysaneysa dhirtu waa geedi socod dheer oo aan mar walba ku habboonayn qofka deggan xagaaga. Intaa waxaa dheer, geedaha waxay sameeyaan hooso dheeraad ah dacha, taas oo sidoo kale aan loo baahnayn xaaladaha xajmiga xaddidan.
Carro badan iyo kor u qaadida heerka sariiraha. Xalka dhibaatada kiiskan waa mid si khaas ah loogu dhexyaalaa iibinta carrada iyo kordhinta wadarta guud ee dhulka ee dacha. Doorashadani waa mid dhab ah, laakiin qaali ah iyo waqti-qaadashada, taas oo xaaladaha dhabta ah aysan u oggolaanin inay tixgeliyaan sida ugu weyn.
Waa maxay nidaamka dheecaanka, qaababka dhismooyinka iyo sifooyinka
Kafaaradaha dufanka - mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee isgaarsiinta injineernimada abuuray goobta. Waxay ka caawisaa biyaha dhulka, biyaha roobka iyo dhalo biyo yaryar si aysan u daadin goobta iyo, si waafaqsan, waxay ka hortagtaa biyaha. Dhab ahaan, waxaa jira siyaabo badan oo lagu nadiifiyo aagga biyaha, laakiin noocyada soo socda ee dareeraha ayaa si fiican u cadeeyay:
Biyaha dusha sare (nooca furan);
Dheecaan qoto dheer (nooc xiran).
Waxay leeyihiin tiro naqshad iyo qaabab shaqeyn, sidaas darteed, ka hor intaadan isticmaalin tan ama nooca dheecaanka ee guryahooda dalkooda, waa in si taxadar leh loo baaro.
Biyaha dusha sare ee dacha ayaa u taagan shabakad furan oo furfuran, wareegyada iyo meelaha la helo kuwaas oo lagu fuliyay xagal qaas ah, taas oo ka hortagaysa burburinta ciidda. Nidaamkan ilaalinta ka soo horjeeda qoyaanka xad-dhaafka ah ee xayiraadda xagaaga ee xagaaga ayaa si fiican ugu habboon in biyaha laga saaro wadooyinka, laydhka, saqafyada iyo canopies. Marka la eego biyaha dhulka, dheecaanka dusha sare ee dacha ayaa waxtar leh oo keliya marka la eego tirada badan iyo heerarka sarreeya, maaddaama biyuhu ay si gaar ah ugu ururaan dhulka dushiisa.
Dhinaca dhismaha Hufnaanta ugu weyn ee dheecaanka dusha sare ayaa lagu arkay dhererka ceelka ugu yaraan 30-40 cm iyo xagal ay u egtahay derbiyada dhinacyada ugu yaraan 30 digrii, taas oo hubinaysa ururinta caadiga ah ee biyaha ee goobta. Biyaha dusha sare ayaa jira dhibic iyo qadar. Marka ugu horeysa waxaa loogu talagalay ururinta biyaha ee degaanka ee meelaha dhibicda la xushay. Biyaha dusha sare ee ku xiran waxay ku xiran yihiin qulqulka biyaha dheecaanku ka yimaaddo, yaa ah dheecaan toosan. Biyaha dusha sare ee xaafadaha ku xeeran, sida caadiga ah, waa nooc ka mid ah daloolka godka, iyadoo gacan ka heleysa biyaha kale oo laga saaro aagga.
Qalabka godadka noocan oo kale ahi waa mid aad u fudud, iyo waxtarkooda waxaa lagu xaqiijiyaa oo keliya cabbir ku filan iyo urur habboon oo ururinta iyo saarista biyaha. Qodobada dhuunta qulqulaya ee qulqulaya ayaa waxaa lagu muujiyaa qashin iyo wadiiqo siman oo ku yaalla meelaha ugu weyn ee isku dhafka biyaha iyo biyaha kale. Xaqiiqdii, dheecaan iyo qulqulaya dusha sare ayaa si fiican loo isticmaalaa.
Waa muhiim!Waxtarka dheellitirka dusha sare waxaa lagu hubiyaa oo kaliya iyadoo saxda ah ee abuuritaanka nidaam noocaas ah iyo dayactirkiisa joogtada ah, sida qashinka si dhakhso ah u noqdaan kuwo dillaacsan oo qadhaadhaya.
Dheecaan qoto dheer
Iyada oo ku saleysan magaca, waxay cadeyneysaa in Muuqaalka khaaska ah ee dheecaanka qoto dheer waa goobta dhulka hoostiisa ah. Nidaamka noocan ah, iyo sidoo kale dheecaanka dusha sare, waxaa loogu talagalay in lagu beddelo biyaha dhulka iyo biyaha roobka dacha. Noocyada noocan ah ee dheecaanka sida caadiga ah la xushay iyada oo saldhig u ah goobta juqraafiga ee dhibaatada. Sidaa daraadeed, nooca la xiray ee biyaha biyaha ayaa ugu habboon meelaha hoose iyo meelaha dabiiciga ah ee heerarka sare ee qoyaanka.
Marka la eego qaababka naqshadeynta, waxaa lagugula talinayaa inaad kala qaybiso dheecaan qotodheer:
Cabbirka qoto-dheer ee nooca cagaarka ah ayaa ah midka ugu caansan waxayna u muuqataa in ay xiran yihiin tubooyinka, tuubooyinka iyo baayacmooyinka lagu dhejiyo dhulka hoostiisa. Nidaamka tooska ah ee nidaamka dheecaanka biyaha ayaa ah aaska, oo leh qalab qaboojin khaas ah. Iyadoo loo eegayo habka adag iyo isticmaalka qalabka korontada, naqshadeynta iyo hirgelinta dheecaanka noocan oo kale ah way adagtahay, waqti qaadashada iyo kharash badan. Sababtaas awgeed waa in qulqulka qotodheer loo isticmaalo marar dhif ah.
Nashqada isku dhafan - isku-dar ah noocyada kala-soocidda dhirta iyo qoyaanka. Isticmaalida isku-dhafan sidoo kale ma aha mid la talin. Sida waddooyinka waaweyn, tuubooyinka leh godado hore loo sameeyey iyaga ayaa loo isticmaalaa in lagu nuugo biyaha. Qoto dheer ee kanaalka sida 40-50 cm.
Ma taqaanaa?Qulqulka qoto dheer waa habka kaliya ee lagu xakamaynayo qoyaanka ciidda ee kor u kacay iyo dhulka dhulka, taas oo dhammaan dhulka dhulka lagu beeray oo la beeray.
Sida loo sameeyo dheecaan dusha sare leh gacmahaaga
Cabbitaanka dusha sare ee xagaaga xagaaga ee gacmahaaga ayaa la samayn karaa si aad u fudud, iyada oo la hubinayo waxtarka sare ee hawlaha la qabtay. Isla markiiba waa muhiim in la ogaado taas Habkani waa kan ugu dhaqaalaha badan iyo kan fudud. Sida hore loo soo sheegay, dheecaannada dusha sare waxaa ka mid ah isu-geynta nidaamyada qulqulaya iyo qulqulka dhibcaha. Sidaa daraadeed, geedi socodka sameynta furitaanka furan ee dacha, waxaa lagama maarmaan ah in lagu rakibo waraaqaha biyaha, nidaamyada dheecaanka, walxaha difaaca iyo qodaya qashinka.
Nooca ugu caansan ee dheecaan furan waa nidaam qiyaas ah oo bixiya heer ku filan oo ilaalin buuxda leh. Naqshadani waa mid fudud oo uma baahna xirfado gaar ah. Saldhigga hirgelinta habkan waa diyaarinta saxda ah ee qorshaha dacha - waa inuu ka tarjumaa dhammaan dhismayaasha, dhirta, iyo, dabcan, meelaha roobka iyo biyaha dhulka la ururiyo intooda ugu badan. Taas waxaa sii dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la xusuusto waddada biyo-leexinta godka godka ama meel ka baxsan dhulka.
Ma taqaanaa?Inta badan bannaanka u khibrad badan, xalinta dhibaatada biyo badan oo dhulka ku yaala iyadoo la adeegsanayo godadka godadka, waxay abuuraan biyo badan oo ku filan, kadibna loo isticmaalo waraabka. Tani waxaa lagu qanciyaa adoo xiraya godka iyo rakibida bamka.
Sameynta qorshe isku mid ah, xasuuso: biyaha waa in laga saaraa dhinaca jihada. Intaa waxaa dheer, si loo yareeyo aagga la isticmaalo ee ciidda, waddooyinka leexinta biyaha waa in la sameeyaa iyadoo la raacayo tareenka ugu yar.
Ka dib qorshaha dhamaystiray, waxaad u baahan tahay inaad qodo godadka qoto dheer iyo qiyaas dhan 30 cm (mugga qashinka waxaa loo go'aamiyaa si madaxbannaan, iyadoo ku xiran mugga biyaha dhulka iyo biyaha roobka). Derbiyada dhinaca guntooda waa in si gaar ah loo sameeyo si taxaddar leh si mustaqbalka loo dhimo. Dhamaan xayiraadyada lagu muujiyay qorshaha, sida caadiga ah, ayaa lagu daraa hal mid waxaana keena godadka, si kastaba ha ahaatee, haddii biyuhu si sahlan looga qaadi karo meel ka baxsan goobta, ka dibna waxaa laga dhigi karaa mid madaxbannaan.
Dhamaan tuulooyinka ama nidaamka kanaalka waa in lagu xardhay foorno ama tareemo, taas oo u oggolaanaysa in aan dib loo dhigin, laakiin si deg deg ah biyo u daadi. Si aad u sameysid joomatari ee qashinka, filimku wuxuu u baahan yahay in la hagaajiyo ciddiyaha, dhulka lagu riixo, ama qalabka kale ee la hagaajiyay. Filimka dhinaca derbiyada, ee kor ku xusan, waxaa intaa dheer in lagu xoojiyay dhar alwaax ama birta ah, lagu rakibay width width 30-50 cm.
Waa muhiim! Si loo hubiyo in filimka ku filan ee filimka laga saaro xaalad kasta, masaafada u dhexeysa waa inay ahaato mid ugu gaaban. Waa in la xusuustaa oo la fahamsan yahay in faahfaahinta saxda ah iyo saxsanaanta marxaladdan si weyn loo go'aamiyo mudada dheer iyo waxtarka natiijada kama dambaysta ah.
Qaadashada qiimaha - xaaladaha qaarkood, derbiyada iyo saldhigga qashin-qubka ayaa la isku haystaa, taasoo si dhakhso ah u tirtiraysa dhibaatooyin iyo dhibaatooyin badan Nidaamkan ururku aad buu qaali u yahay, wuu shaqeeyaa wuxuuna u baahan yahay xirfado gaar ah. Dheeraad ah, dheecaanka aagga banaanbaxa, oo ay matalaan nidaamka ama shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed, waa inay kala badhdaan jajabyada qoryaha, qashinka qoryaha iyo qashinka. Waxaa lagama maarmaan ah in biyuhu si xor ah u wareegaan iyada oo aan wax dhicin.
Lakabka ugu dambeeyey ee loo baahan yahay in la buuxiyo waa carrada dabacsan, waxa la buuxiyaa ilaa heerka heerka ciidda uu yahay heer. Qaybtan nidaamka dheecaanka ah ayaa loo abuuray nadiifinta adag iyo ka saarista qulqulka biyaha dhulka iyo biyaha roobka.
Talaabada ugu dambeysa waa in la rakibo tuubooyinka biyaha iyo nidaamka duufaanka guud ahaanba. Miisaankoodu waa ku filnayn - waa ujeedkani in dheecaan qotodheer la abaabulo, laakin waxay faa'iido u yeelan doonaan marka ay dhacdo in heerka biyuhu uu noqon doono mid aad u daran, iyo dheecaanka dusha sare ee aagga magaalooyinka aan si buuxda ula qabsan karin. Sidaa darteed, dheecaanka dusha sare ayaa si buuxda u xallin doona dhibaatada biyaha roobka iyo dheecaanka dhulka hoostiisa; sidoo kale, waxay noqon doontaa mid waxtar leh, jaban oo degdeg ah.
Sidee u daadi karayaan qashin qoto dheer leh
Xaaladaha qaarkood, dheecaannada dusha sare ma xallinayaan dhibaatada, sababtoo ah mugga ballaaran iyo ku dhowaad biyaha dhulka. Markaas waxaa lagugula talinayaa inaad abuurto dheecaan ka mid ah aagga magaalooyinka banaan ee nooca xiran. Cabbitaanka qoto dheer waxaa lagu kala saaraa awoodda si buuxda loo xalliyo dhibaatada qoyaanka xad dhaafka ah, sidoo kale waxay ilaalisaa muuqaalka dabiiciga xagaaga.
Bilowga abuuritaanka noocyadan nidaamka dheecaanku sidoo kale wuxuu ku bilaabmaa diyaarinta qorshe iyo sawir dhammaystiran oo khadka ah oo ay ku jiraan tuubooyinka la dhigi doono. Jihada biyaha laga saaro - dhinaca jihada. Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso qoto dheer ee ay dhacaan. Sidaas, ee ciidda ugu cufan qoto dheer ayaa noqon doona wax ka badan 50 cm, iyo ciidda ciidda - ilaa 1 mitir.
Sidoo kale tixgelin xaaladaha cimilada - waa mid aad u muhiim ah in xilliga qaboobaha qaboobaha tuubooyinka leh haro biyo ah oo iyaga ka mid ah aan la jajabin, iyo ciidda barafka ah ma burburin.
Dhaqdhaqaaqa dhammaan beeralayda iyo takhasusle waxay doortaan tuubooyinka balaastigga ah ee balaastigga ah sida wadooyinka suntan. Waxay ka jaban yihiin, la awoodi karo oo la adkeyn karo. Xaaladaha qaarkood, ilaalinta dheeraadka ah, tuubooyinka ayaa lagu daboolay textile, taas oo ka hortagaysa ciid in ay gudaha ku soo galaan oo si weyn u kordhiso nolosha adeegga nidaamka oo idil.
Siyaabaha bullaacadaha iyo meesha ay kuugu soo dhoweeyeen waxaa lagu diyaariyey daryeel gaar ah. Xaaladda nidaamka qoto dheer ee xiran, waxaa lagula talinayaa in la qodo daboolo leh width aan ka badnayn 50 cm, oo aan daboolin dhinacyada sideedaba. Biyaha biyuhu waxay ku abaabuli karaan godadka godka, iyo dhulalka goobta. Sida ku jirta nidaamka furan, waxaa lagugula talinayaa in la gooyo derbiyada godadka, taas oo abuuraysa taangiyo biyo nadiif ah, taas oo hubaal ah inay faa'iido u yeelan doonto degaan walba xagaaga.
Ka dib markii ay diyaarinayaan dhamaan tuullooyinka iyo sameynta nidaam dheeri ah oo biyo ah, waa in loo diyaariyaa tubbada. First of all, waxaad u baahan tahay inaad abuurto barkinta boogta, ku ridaya ciid iyo quraarada hoose (10 cm kasta). Kaliya kaddib tani waxay billaabaysaa in la geliyo tuubooyinka iyo isku darida nidaam hal mar ah iyada oo loo marayo xirmooyinka caaga ah, doorashada taas oo kala duwan.
Meelaha dhinacyada dheecaanku ku jiraan waxaa sidoo kale ka buuxsamay ciid iyo jajab. Dusha sare ee qulqulaya waa in la dhigaa dhar-dukuminti oo ka ilaaliya dhuumaha dhoobada ka samaysan ciid, cawska iyo ciidda. Dhammaadka geeddi-socodkii - ciid qoyan oo qulqulaya (15 cm), dhalada (15 cm) iyo ciidda. Goobta waa in la sameeyaa hareeraha, sababtoo ah muddo ka dib dhulku wuxuu degi doonaa heerkulka dhulka intiisa kale. Nooca noocan ah ee biyaha hoostooda kharash badan iyo kakan Si kastaba ha ahaatee waa ka duwan yahay adkeysiga iyo waxtarka sareeya isku midka ah taas oo aan si fudud u jirin.
Dhalinta DIY, habka ugu fudud
Maadaama ay ka caddaato kor ku xusan, dheecaan ah ee dacha ayaa loo samayn karaa siyaabo badan, iyadoo la ilaalinayo waxtarka tallaabooyinka, Si kastaba ha noqotee, dadka badankood, dabcan, sababaha qaarkood waxay doonayaan in ay si deg deg ah u daadiyaan dhulka, raqiis ahaan iyo kalsooni. Waa shuruudaha shuruudaha ah in dheecaanku ay ku kulmaan dacha, habka ugu fudud ee aan u bixin karno.
Ma taqaanaa? Xaaladaha intooda badan, waxtarka dheellitirka badanaa waxay ku xiran tahay awoodda ceelka si dhakhso ah biyaha u daadinayaan ciidda. Xayawaan aad u jilicsan ma gabi ahaanba ilaalin doono biyaha, dhirta si fudud uma heli doonaan waqti la quudiyo, iyo xad-dhaaf ah cufan ayaa biyo qabta. Go'aaminta dareenka dhulka ee aag gaar ah waa mid sahlan - waxaad u baahan tahay inaad buuxiso godadka diyaargarawga biyaha oo dhan ilaa nus. Haddii biyuhu ka baxaan wax ka yar 24 saac, carrada waa mid aad u qurux badan. Haddii xitaa laba ama seddex maalmood ka dib biyaha aysan gebi ahaanba dhulka ku dhicin, ciidku aad buu u cufan yahay, godkuna ma shaqeynayo.
Natiijada ugu dambaysa ee abuurista dheecaanku waxay ku xiran tahay fulinta dhammaan talooyinka iyo talooyinka. Marka, si aad u sameyso dheecaan leh gacmahaaga, waxaad u baahan tahay:
First of dhan samee qorshe dhamaystiran oo ku saabsan gurigaaga xagaaga, taas oo tilmaamaysa khadadka murgacan ee loo baahan yahay in godka, boodada ama godadka. Qulqulka biyaha qaata waa inuu ahaadaa ugu yaraan 1 mitir oo dherer ah iyo dhinacyaduna sidoo kale ugu yaraan mitir;
Ka dib qorshaha horumarsan, qashinqoto si tartiib tartiib ah ayeey u kordhiyaan Baaxadda godka waa inay ahaataa ugu yaraan 30 cm;
Filimada qurub oo diyaar ah (waxaa loo isticmaali karaa) jarjar dhejiyo dheer oo ballaaran, qiyaastii le'ekaanka cabbirka jeexitaanka (80 cm). Cirbadaha soo baxaya waxay daboolayaan godadka godadka godadka, oo ay ku jiraan meelaha dusha sare ah. Degganaanta filimka darbiga waxaa si fiican loo bixiyaa jarjar alwaax ah (waa inay noqotaa qiyaastii 1 cm oo ka dheer inta ballaaran ee qulqulka), lagu rakibay meel fog oo ku dhow 30-40 cm midba midka kale. Waxaa fiican in lebbiska jabsan, dhagxan la burburiyo, qashinka qoryaha ee saldhigga filimka. Si loo hubiyo in filimka ku filan ee filimka ku yaal xayawaanka marxalad kasta, lakabka lagu duubay bartamaha godka waa inuu ahaado mid dhererkiisu yahay 5 cm oo ka sareeya dhinacyada qulqulka dareeraha.
Xigta soo socota jarjar baaxad ah oo filim caag ah (qiyaastii 10-20 cm ka badan oo ah ballaadhka filimka hore loo adeegsaday). Calaamadahan waxay u baahan yihiin inay daboolaan buuraha la sameeyay, iyagoo abuuraya aruur yar. Hoosyadan waxaa lagu abaabuli doonaa socodka bilaashka ah ee biyaha.
Dhalidda soo baxday waxaa ka buuxsantay dhul dabacsan ama ciid, ka dib markii la xiro.
Waa muhiim!Ka dib marka dheecaanku ku dhammaado gacmahaaga, waxaad ku socon kartaa si xor ah. Si kastaba ha ahaatee, waxba ma aha in lagu beeray ciidda this, xitaa cagaarka, maxaa yeelay waxaa si lama filaan ah u baaba'aan sabab u tahay qoyaan sare.
Представленный вариант создания дренажа на собственном дачном участке, невзирая на простоту, не только waxaa lagu kala saaraa waxtarka sare iyo mudnaanta natiijada, laakiin waxaa sidoo kale laga helaa mulkiilaha kasta oo ka mid ah cawska xagaaga ee dhibaatada leh.
Sababtoo ah sababo kala duwan, qoyaan kor u kacay ee meelaha ku nool magaalooyinka waa caadi, laakiin, inkastoo xaaladda noocan ah ee dhibaatada ah ee xaaladdan, aad gabi ahaanteed waa inaadan quusan, dheecaan ah dacha si fudud ayaa loo abaabuli karaa gacmahaaga, isagoo horey u soo bartay oo wuxuu ku dabaqay hababka loo lulayo qulqulka dacha ee lagu sharxay maqaalkan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cabbitaanka dusha sare 2020